Yan Aung: အကြွေနလုံးသားရဲ့မာန
ငါ့ရဲ့ပကတိမာကျောတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို မင်းသိအောင်လို့
ငါ့ရဲ့ထီမထင်တဲ့ အပြုံးတွေကို မင်းခံစားသက်ဝင်အောင်လို့
ငါ့ရဲ့မလဲပြိုတဲ့ နှလုံးသားကို မင်းသိအောင်လို့
ဟယ် အဲလိုတွေ မဖြစ်ကြနဲ့လေ ဒွတ်ခပါပဲ
မောင်ရန်.. ကဗျာလေးအနေနဲ့ အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတယ် ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ အတွေ့ အကြုံဖြစ်နေရင်တော့ ၊ အားလုံးကို ခ၀ါချလို့ မေ့ပျောက်ဖို့ ကြိုးစားပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းချင်တယ် ။ အဲလိုလုပ်ဖို့ တို့လည်း ကြိုးစားနေတယ် ။ မမေရဲ့ ခုတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်တခုထဲကလို ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အောင်နိုင်ခြင်းတဲ့ ။
မဂျစ်ကြီးတို့ မမေတို့လိုခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောဖို့အထိတော့ ဘာညာ မရင့်ကျတ်သေးဘူးလို့အဲ့လိုတော့ မပြောလိုက်နိုင်သေးဘူးကိုရန်။
ဒါပေမဲ့ကိုရန်overcome လုပ်လိုက်နိုင်တာကိုဝမ်းသာပါတယ်။ aza aza fighting bro!!!!!
တကယ်တော့…အသဲကွဲတယ်ဆိုတာ…တခဏ ခံစားမှု တခုပါပဲ…ဖြစ်တုန်းခဏမှာ…နာကျင်ပေမယ့်…အချိန်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ဒါဟာဘာမှ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်လာမှာပါပဲ…အချိန်က ကိုရန်ကို.. အမြန်ကုစားနိုင်ပါစေ…
မေ့ဖို့လဲ မကြိုးစားပါနဲ…မုန်းဖို့လဲ.. မကြိူးစားပါနဲ..ကိုရန်ပဲ..ပင်ပန်းရမှာပဲ…သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ ရေစက်ကုန်သွားတယ်လို့..တွေးပြီး… ဥပက္ခ ပြုနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ…သူ့ကိုလဲ..အပြစ်မတင်ပါနဲ့…တကယ်တော့…ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တောင်မနိုင်တဲ့..လောကကြီးမှာ..သူများ စိတ်ကို ဘယ်နိုင်ပါ့မလဲနော်…သံသရာခရီး တယောက်မှာ..ကိုရန်သူ့အပေါ် တခုခုလုပ်ခဲ့လို့ နေမှာပေါ့နော်…ကျေအေးလိုက်ပါ…တကယ်လို့ နောင်မှာ..ကိုရန်က ပြန်…ပြုဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ရင်တောင်…ပြန်မပြုမိဖို့..ဆုတောင်းပါနော်…အားလုံးဟာ…အကြောင်းနဲ့..အကျိုးကြီးပါပဲ…သူလဲ..သူ့အကြောင်းနဲ့ သူရှိမှာပေါ့နော်….
ကိုရန်တယောက်အရင်လိုပဲ..မြန်မြန် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေ နိုင်ပါစေ….မေတ္တာစစ်နဲ့ ချစ်ရမယ့်သူနဲ့လဲ…အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေ..
ညလေး ကော်မက်ဝင်ရေးထားတာ ပေါ်ဘူးလား။
ညလေးဆို ဘာမှ စိတ်ထဲ ထည့်မထားဘူး။
ကျွန်တော်ကတော့ မာနတွေခ၀ါချလိုက်ပြီ။ အချစ်ကြောင့်လေ . . ။
ကိုရန်အောင် ဒီကဗျာ အရဆိုရင် ကျွန်တော်ရထားတဲ့ သတင်းက ခိုင်လုံနေပြီနော် :D
မာနဆိုတာ တန်ဖိုးကြီးပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာလဲ မသေး ငယ်ပါဘူး။မာနကို မေ့ပစ်ထားလို့ ရော မရတော့ဘူးလား ကိုရန်.......မာနကိုရောကောင်မလေးကိုရော အခုမေ့
လိုက်ပါ။ချစ်သူအသစ်ရရင်တော့ မာနလေးကို မေ့လိုက်ပါ